Regolith: i3wm ကိုအခြေခံပြီးခေတ်မီ။ အလုပ်လုပ်သော Desktop Environment | Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, applications များ
ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံမှန်အတိုင်းအခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောအခြားသူတစ် ဦး အားပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် (DEs) ရှိပြီးသား။ ဒီနေ့ငါတို့ DE နှင့်အတော်လေးအသစ်နှင့်နှင့်အတူအခြား DE အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ် မျက်စိ - စွဲမက်ဖွယ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရှုထောင့်များအမည်ပါသော Regolith ပါ.
Regolith ပါ como « Desktop Environment »၎င်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီးပြောနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများအနက်၎င်းသည်လှပပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သောရောနှောခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည် I3wm နှင့် Gnome။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ Linux Distro အပေါ်အခြေခံပြီးတူညီတဲ့အမည်နှင့်အတူ Ubuntu ကိုနှင့်အဘယ်သူ၏နောက်ဆုံး တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း အဆိုပါဖြစ်ပါသည် 1.5.
သို့သော်၏ကိစ္စသို့မဝင်ခင် Regolith ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စာပေအချို့ကိုချန်ထားပါသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သူတို့ဘယ်မှာသူတို့အကြောင်းဗဟုသုတတိုးပွားစေနိုင်မလဲ။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ, Moksha, Deepin Desktop Environment or DDE, Pantheon, Budgie Desktop, GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး, အိမ်ထောင်ဖက်, LXDE y LXQT.
Equinox Desktop Environment (EDE) - Linux အတွက်သေးငယ်။ မြန်ဆန်သော DE
1 Regolith- WM I3wm + DE Gnome
1.1 Regoliht ကဘာလဲ?
Regolith- WM I3wm + DE Gnome
အဆိုပါအညီ Regolith စီမံကိန်းတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"Regolith သည်ခေတ်မီ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မလိုအပ်သောအခမ်းအနားများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Ubuntu, GNOME နှင့် i3 တို့ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် Regolith သည်ကောင်းမွန်စွာတည်မြဲပြီးတသမတ်တည်းရှိသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်".
ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို အတူတူပင်:
ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ချဲ့ထွင်မှုကိုခွင့်ပြုသည့် functional user interface ပါ ၀ င်သည့်ရိုးရှင်းသော Desktop Environment သည်၎င်းဒြပ်စင်များစွာတွင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် GNOME System ၏အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် i3-wm ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ရောနှောနေခြင်းအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
အသုံးပြုသူအသစ်များကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်နှင့်သင်ယူရန်အလို့ငှာအလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်သည် Tiling Window Manager အမျိုးအစားရှိ Window Manager ကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏ interface ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
တသမတ်တည်း Xresource စီစဉ်မှုမှတဆင့်စိတ်ကြိုက်နှင့်တိုးတက်ရန်လွယ်ကူသော graphical user interface ။
App Store နှင့်၎င်း၏ Package Repositories အသုံးပြုခြင်းကိုခွင့်ပြုသော Linux Ubuntu Distro နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှု သို့သော်၎င်းသည် Ubuntu မှရရှိသောသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်သောအခြား GNU / Linux Distros တွင်သီးခြားတပ်ဆင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်၎င်း၏ User Interface (UI) နှင့်လွယ်ကူစွာပြုပြင်ထားသောအခြေခံကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများအတွက်ထူးခြားဆန်းသစ်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် build script နှင့် package ၏ metadata များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်သင့်အား၎င်းကိုပါလွယ်ကူစွာ fork လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သူ့ကတည်းက တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဘာသာစကားများစွာရှိသည် ထိုသို့အတွက်အလွန်ပြည့်စုံလာပါတယ် စပိန်ဘာသာစကား၊ အခြားအဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များအကြား၊ နောက်ဆုံးပေါ်အကြောင်းအရာများအားဖန်သားပြင်များ (ဖန်သားပြင်များ)၊ စာရွက်စာတမ်းများ (လမ်းညွှန်များ / လက်စွဲများ)၊ ရင်းမြစ်များ (ရှိပြီးသားဗားရှင်းများမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည်) တွင်အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ Regolith ပါ တစ် ဦး အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်လာပါတယ် Ubuntu-based Linux distroယင်း၏ထံမှသို့သော် GitHub အပေါ်သိုလှောင်ရုံ command ကိုသုံးပြီးစုစည်းနိုင်ပါတယ် debuild အထုပ်များကထောက်ပံ့ပေး devscripts ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မှတဆင့် LaunchPad ရှိ PPA repositories.
မှတ်ချက်ဖြေ။ ။ တည်ငြိမ်တဲ့စကားလုံးကို“ release” လို့အစားထိုးနိုင်တယ်။
ဆော့ဗ်ဝဲရင်းမြစ်ဖိုင် (repositories) ကိုဖန်တီးပြီးအောက်ပါအကြောင်းအရာလိုင်းကိုထည့်ပါ။
မှတ်ချက်: သင် groovy ဟူသောစကားလုံးကိုသင်၏အဆင်ပြေမှုနှင့် / သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အရ focal, eoan နှင့် bionic တို့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
အောက်ပါ command command များ Execute:
မှတ်ချက်ဖြေ - အရင်က install မလုပ်ဖို့၊ i3wm ni i3wm- ကွာဟချက်မှီခိုမှုပconflictsိပက္ခများသို့မဟုတ်အခြားသူများကြောင့်ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်လျှင်၊
ကိစ္စနှစ်ခုလုံးမှာသုံးတာပါ Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ o Debian နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ, သင်မူရင်း packets တွေကိုဖြည့်စွက်ရန်ဟုပြောသည် repository ကိုအတွက်အခြားတည်ဆဲ packages များမဆိုအခြားထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် Regolith ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Regolith»သေးငယ်။ မြန်ဆန်သည် I3wm နှင့် Gnome အပေါ်အခြေခံသော Desktop Environment (DE), တစ် ဦး အတွက်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်လာရသော GNU / Linux Distro ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အခြေခံသည် Ubuntu၊ တူညီတဲ့နာမည်အောက်မှာ Regolith Linux; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Regolith - i3wm ကိုအခြေခံပြီးခေတ်မီ။ အလုပ်လုပ်သော Desktop Environment